नेत्र बिक्रम चन्द “विप्लव”लाई गुल्मीबाट खुल्ला पत्र – Gulminews
Home/बिचार/नेत्र बिक्रम चन्द “विप्लव”लाई गुल्मीबाट खुल्ला पत्र
नेत्र बिक्रम चन्द “विप्लव”लाई गुल्मीबाट खुल्ला पत्र
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ जेष्ठ १३, सोमबार २१:२४ मा प्रकाशित
आरामै हुनुहुन्छ हाेला ! यहाँ म र हाम्रो सबै टिम (जनता) ठिकै आरामै छाैँ । तपाईंलाई पनि आरामकाे कामना गर्दछु, गर्दछौं ।
आजकाे वन्दले हामी निकै उत्साहित छाैँ । किनभने सदा जस्तो विहानै ५ बजे उठ्नुपरेन । चिसाे पानीले बिहानै मुख छ्याप्नु परेन । निद्रा नपुग्ला भन्ने चिन्ता नै भएन । स्कुल ठ्याक्कै बन्द, धाउनैपरेन । कामकाज नि सधैकाे जस्ताे गर्नुपरेन । दिउँसो भरि आनन्द भयाे । ढाडै दुख्न सम्म सुतियाे ।
विप्लव दाइ आजको याे वन्दले मलाई लाग्याे अब हप्तामा एकदिन बन्द गर्ने पर्छ । बम पड्काउनै पर्छ । साेझा जनता मार्ने पर्छ । जनप्रतिनिधि तर्साउनै पर्छ । छपार्नुपर्छ । थर्काउनु पर्छ । हान्नुपर्छ । बम अब चाैरमा हाेइन घरघरमा पड्काउनुपर्छ ।
मैले तपाई लाई याे कुरा निवेदन गर्छु कि अब बन्द हप्तामा १ दिन गर्ने पर्छ । हाेइन भने हामीले हप्तामा दुईवटा शनिवार हुनै पर्छ । आजको बन्दले म मात्रै हाेइन धेरै खुसी छाेँ । अबका दिनमा पनि तपाईंकाे बन्दकाे प्रतीक्षा गरिरहने छाैँ । गर्नेछाैँ ।
नेपाली जनताहरुले तपाईंको बन्दबाट यस्तै सोच्दै छन् भन्ने ठान्दै हुनुहुन्छ ? बिल्कुल गलत, तपाईंको बन्द र बम आतंक, चन्दा आतंकले सबैलाई त्रासमा राखेको छ । तपाईंले साेझा जनता मारेर के पाउनुहुन्छ ? बन्दले महलमा बस्नेहरु ऐस आराम गर्छन् । सास्ती खेप्ने त केवल हामी जनताले हाेइन र ? तपाईले साेझा जनता हाेइन भष्ट्रचारीको बिरोध गर्नुस्, कारवाही गर्नुस् हाम्रो त्यसमा हाम्रो केही बिमती छैन ।
सोझा साझा जनता बस्ने घर र निर्दोष बालबच्चा खेल्ने चाैरमा बम पड्काउने कामको कदापी समर्थन गर्न सकिँदैन । हामी जनतालाई त्रासरहित राखेर नराम्रा कामकाे बिरोध गर्नुस् याे नेपाली मनदेखि सलुट हान्न चाहान्छाैँ ।
आज विभिन्न ठाउँमा बम पड्काएर क्षति गराउनु भन्दा सिंहदरबार भित्र रजाँई गर्नेहरुका अराजक गतिबिधिहरुको भन्डाफोर गर्नुभएको भए अती उत्तम हुने थियो । राजनिती काे नाममा आसेपासे र आफन्तकाे पक्षपोषण मात्रै गर्नेलाई त्यहाँ लगाउने मुद्दा लिएर जनता माझ आउनुस् सबैले ताली ठोक्ने छन् ।
मैले फेरी याे भन्छु कि तपाईको बन्दको नाउँमा कसैकाे अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपरोस, दिनभरी मजदुरी गरेर बेलुका छाक टार्नेले भोकै बस्न नपरोस अनी अस्पातल हिँडेकी सुत्केरीले बाटैमा ज्यान गुमाउन नपरोस् । भष्ट्रचारी, दलाली, चाेर, डाँका राजनीतिकाे नाममा देश बेच्नेहरुलाई कारवाही गर्नुस्, जनताले तपाईंकाे जयकार गर्नेछन्, चोक्चोकमा बम पड्काएर हैन ।
उही सकारात्मक परिवर्तन चाहने तपाईंको जनता
हाल: तम्घास, गुल्मी
(महतारा गुल्मीमा कृयाशिल पत्रकार हुन्, उनी सामुदायिक रेडियो स्काई एफ.एममा कार्यरत छन् ।)